Plant eziphathekayo kugecwa, Umxhubi eziphathekayo, Boom eziphathekayo Pump Truck - Conele Group
3 izinyawo production
Kwisiseko semveliso ibekwe eMzantsi China, yaseMzantsi China kunye North China.Convenient ulwandle kunye kaloliwe zokuhamba liqinisekisa uncedo lukhulu.
izixhobo iintlobo 15
Ukugubungela concrete Ukuxutywa zokumpompa ubeka izixhobo okurisayikilisha, ukhetho ngakumbi kuwe.
amava iminyaka 25 '
Yasekwa ngo-1993, elingcwele, R & D, ukuthengiswa kunye nasemva-ukuthengiswa izixhobo eziphathekayo.
inkampani 28 isebe
amagatya ezahlukeneyo zigxila R & D kunye nokuveliswa nodweliso lweenkqubo ezahlukeneyo, ukuqinisekisa ukuba umgangatho kwicandelo ngalinye kwinqanaba ibhizinisi kwaye ngokuzimeleyo ithengiswe yaye wasinda emarikeni.
Kubuthwa yenkampani kwaye esikhuthaza iitalente zobungcali oluhlala uphuhliso lwexesha elide yenkampani.
inkonzo Elungiselelweyo ibonisa amandla yobugcisa kunye nemarike acceptance.Almost yonke yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho, lugubungela ngaphakathi ozikhethele iindawo lophawu, umhombiso yangaphandle, etc.OEM kunye ODM inikezelwa.
Phambi nathengisa siza sicebisa izixhobo ezifanelekileyo ngokweemfuno zabathengi kunye nezinye iimeko eziphathekayo usebenzisa amava ethu nokuthengisa knowledge.After yobungcali, injineli yethu kufumaneka ngokususa ufakelo kunye noqeqesho kwi-intanethi okanye kwi kwisiza.
Factory ixabiso ngqo
Ufuna agents.The inkqubo agency sisicwangciso enkulu qela lethu ukuba babeke yonke world.we'll senze konke okusemandleni ethu ukuxhasa nokukhusela umdla weli ixabiso agent.lower, izibonelelo ezisemgangathweni umxhasi, izibhengezo ezamahala ukukhuthaza mboniso njl
Self ukukhwela wabeka boom